nofap ကို ၃ လကြိုးစားပြီးတဲ့နောက်မှာတော့သင့်ရဲ့ Brain On Porn
3 လကြာ nofap ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှငါ၏အကြံအစည်၏ရွေးချယ်ရေး
အထွေထွေအက်ဆေး၏စုစည်းမှု; Nofap နှင့်ဘဝ
ဤသည်3လကြာ nofap ကြိုးစားခဲ့ပြီးမှငါ၏အကြံအစည်တစ်ရွေးချယ်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျစိတ်ဝင်စားဖို့ရှာတွေ့စေခြင်းငှါဤကဲ့သို့သောရုံအချို့ယေဘုယျအချက်များအဖြစ်မပုံပြင်။ အဆိုပါအာရုံစိုက်အသက်တာ၏ပုံကို nofap အတ္တ ဟူ. သော်လည်းကောင်းအားလုံးဒေသများသည်။
စွဲလမ်းမှု၏ပြင်းထန်မှု:2PMO သို့မဟုတ် MO ကိုတစ်နေ့လျှင်ပျှမ်းမျှ
1 ကြိုးစား:5ရက်ပေါင်း
2 ကြိုးစား:7ရက်ပေါင်း
3 ကြိုးစား:7ရက်ပေါင်း
4 ကြိုးစား: 11 ရက်ပေါင်း
5 ကြိုးစား: 35 ရက်ပေါင်း
6 ကြိုးစား: 14 ရက်ပေါင်း
မူးယစ်ဆေးရက်နာ: ငါ့နောက်ဆုံးထွက် relapse အကြောင်းရင်း
Prolactin & Post-fap ခံစားမှု
fapping ပြီးနောက်စိတ်ဓါတ်များ, ဇာတ်ကောင်များနှင့်အလားအလာအတွက်ခြားနားချက်ယခုငါ့အားသိသာသည်။ မနေ့ကပြန်လည်ဖြစ်ပွါးပြီးနောက် ၂ ပတ်အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပြောင်းရွှေ့ချင်တဲ့အိပ်ရာပေါ်မှာကျွန်တော်အိပ်ခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တော့်အတွေးတွေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသေကြောင်းကြံဖို့လှည့်ခဲ့ရတယ်၊ အစာအိမ်ထဲတွင်အမဲလိုက်နေသောဗလာကျင်းသောခံစားမှုရှိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်လိုအပ်သောအစားအစာများလိုအပ်ကြောင်း၊ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ကျွန်ုပ်ခန္ဓာကိုယ်၌ခဲယဉ်းသောကြွက်သားများကိုတစ်မိနစ်တိုင်းအစာစားနေသည်ကိုသိသည်။ ငါဘာမှမဒုက္ခပေးနိုင်တဲ့ချိုမြိန်သတိလစ်သွားခြင်းကိုပြန်သွားဖို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ ရက်သတ္တပတ်များအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်လှပပြီးနေသာသည် ငါလုပ်ချင်တာကထိုင်ခုံမှာထိုင်တာပဲ။ ငါအပြင်မှာမပိုင်နဲ့တူငါခံစားရတယ်။ ငါ့မှာခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာကိုသိပေမယ့်လည်းငါဟာ ၀ မ်းနည်းစရာကောင်းပြီးစက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ကောင်းတယ်။ ငါအစာရှောင်ချင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကျုပ်ဂျင်းဘောင်းဘီကိုဝတ်တဲ့အခါသူတို့ကခါတိုင်းထက်ပိုပြီးအားနည်းလာတယ်။ ငါဘယ်သူ့ကိုမှစကားမပြောချင်ဘူး အရူးပဲ
ငါအများကြီးသင်ယူကြသည်။ စူပါဗဟုသုတနှင့်မတူကွဲပြားသောဗီဇများကကျွန်ုပ်ကိုမျှော်လင့်ခြင်းစွမ်းအားပေးသည်။ ငါအကောင်းဆုံးဖြစ်ဖို့ဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါမှတဆင့်ကြည့်ဖို့လိုတယ် ဤသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်ပြီးငါ့ကိုမှောင်မိုက်သောအချိန်လေးများအတွင်း၌ကျွန်ုပ်သွားနေစေသည်။ ဘ ၀ ၏အဓိကအကြောင်းအရင်းကိုသိရန်ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိသည် - အကောင်းဆုံးရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်ဆုချခြင်းစနစ်ကိုဟန်ချက်ညီအောင်ထိန်းညှိပေးခြင်း။
လြယ္ကူ arousal များအတွက်အကူအညီလိုအပ်နေ
စတင်ကတည်းကငါ ဦး နှောက်သည်အလှည့်တိုင်းလိမ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ အစောပိုင်းကြိုးပမ်းမှုများတွင်၎င်းသည် softcore bikini pics နှင့် youtube vids များကိုလျင်မြန်စွာတက်သွားခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့နောက်အမြင်အာရုံလှုံ့ဆော်မှုကိုကျွန်တော်လုံးဝမစွန့်ပစ်ဘဲအသံဖြင့်ခေါ်ဆောင်သွားသော hypnosis mp3s ကိုတစ်နည်းနည်းဖြင့်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ငါ 'ဒါအမြင်အာရုံမဟုတ်ဘူး၊ ညစ်ညမ်းမှုဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သလဲ။ ' - ကောင်းပြီ၊ ဒါက porn ပဲ။
မကြာသေးမီကငါအတုနှိုးဆော်ခြင်းကိုပြန်လည်စတင်အခြေအနေများ၏အမြင်အာရုံနှင့်အသံပုံစံအားလုံးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ငါ 'ထူးဆန်းစွာ' ငါ '' သန့်ရှင်းသော '' J pop (ဂျပန်ပေါ့ပ်ဂီတ) ဟုခေါ်တွင်သောအရာကိုသို့စတင်စတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်အလွန်သေးငယ်သော်လည်းလိင်အရမဟုတ်သည့်တေးဂီတဖြစ်သည်။ တကယ့်ကိုထူးဆန်းတဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တကယ်ကြိုက်ခဲ့သည်။ အဲဒါကကျွန်မကိုဘယ်တော့မှထပ်ခါထပ်ခါမဖြစ်စေရသလို porn လိုခံစားရတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကွာဟချက်တစ်ခုကိုဖြည့်ဆည်းပေးသလိုပဲ၊ ဒါဟာမကောင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်၊ ကွန်ပြူတာဖန်သားပြင် / နားကြပ်ကပြင်ပကမ္ဘာမဟုတ်ဘဲ 'femininity fix' လိုမျိုးသေချာသည်။ ဒါမကောင်းဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ကိုယ်နှိုက် nofap ။ ငါကခွင့်ပြုခွဲဝေမှုနှင့်ရငျးနှီးမှု၏ခံစားချက်စွဲနေပါတယ်။ ဤသည်ပြင်ပကမ္ဘာမဟုတျဘဲကွန်ပျူတာကနေလာသင့်ပါတယ်။ ငါကဒီမှာပေါ်လမ်းသိပ်အချိန်ဖြုန်းနေကြတယ်။ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ငါသည်ငါ၏အသုံးပြုမှုကိုလာမယ့်အချိန်ကိုဆင်းစကေးပါလိမ့်မယ်။
ငါချုံပုတ်ပတ်ပတ်လည်ရိုက်နှက်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ - ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါကြီးမားသောအပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲသူဖြစ်ရပြီ, ငါယခုငါ့အဆက်မပြတ် fap hangovers ကနေငါ့အကြောက်မက်ဘွယ်သောခံစားမှု၏ရလဒ်ဖြစ်ခဲ့သည်သဘောပေါက်လာတယ်။ ငါနေအောက်မှာအရာအားလုံးကိုလုပ်နေတယ် (ဟုတ်တယ်၊ အရာအားလုံး) လုပ်ခဲ့တယ်။ ပစ္စည်းတခုခုကိုစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းကိုငါကံကောင်းတယ်။
အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကနေ Hangover ငါ၏အနောက်ဆုံး5porn relapses စေကြပြီ။ သူတို့ကပဲဆိုးရွားစွာကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖက်ရှင်အတွက် willpower မှေးမှိန်နှင့် immobilize ။
ဒီတော့ nofap, အရက်နှင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုကျေးဇူးတင်ယခုကောငျးကြိုးအတှကျငါ့အသက်ကိုစွန့်ခွာနေကြသည်။ PMO တက်ပေးခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး, မူးယစ်ဆေးထွက်ကန်နေတဲ့ cakewalk ဖြစ်လိမ့်မည်။
စီးကရက်တွေလည်းဖိနပ်စီးဖို့နီးနေပြီ၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကိုသွားဖို့နည်းနည်းကျန်သေးတယ်။ ဒါဟာငါ nofap လုပ်ကြာကြာ, ဆေးလိပ်သောက်ပြီးနောက်ငါခံစားရတယ်ပိုဆိုးပုံရသည်။ ဒါကြောင့်အခုငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ပြောနိုင်တယ်။ အရင်ကငါဆေးလိပ်သောက်ချင်တယ်၊ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့အစီအစဉ်မရှိဘူးလို့မင်းကိုပျော်ရွှင်စွာပြောခဲ့လိမ့်မယ်။
အားကစားရုံ & ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းများ
အစောပိုင်းကြိုးပမ်းမှုများတွင်အားကစားရုံသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အရေးပါခဲ့သည်။ ငါလေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုနှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုခဲ့ပေမယ့် nofap နဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒါဟာငါဟာအလွန်ကောင်းသောကိုယ်ကာယကိုရရှိဖို့ပထမဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ငါအစောပိုင်းအားကစားရုံခေတ်ကဘာကြောင့်ရလဒ်တွေမရခဲ့တာလဲလို့အမြဲတွေးမိခဲ့တယ်။ အခုတော့ငါသိပြီ - ငါကဒီသံကိုစစ်မှန်တဲ့တွန်းအားပေးဖို့ဂရုစိုက်ဖို့ fapping ကအရမ်းခြောက်သွေ့သွားတယ်။
သို့သော်အမှောင်ခြမ်းရှိသည်။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပြီးကတည်းကငါကကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်။ အသေးအဖွဲချို့ယွင်းချက်များ / အဆီစုပုံမှုများကိုပင်လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိဟုခံစားမိသည်။ လက်တွေ့တွင်မည်သူမျှမပြောနိုင်သည့်အခါ၊ အခြားသူများ၏အမြင်တွင်ကျွန်ုပ်ကိုသုညသို့လျှော့ချလိုက်သည်။ ဒါဟာစွဲလမ်းမှုဖြစ်လာတယ် - ငါစွဲလမ်းပြောရဲဝံ့ ကျွန်ုပ်၏တိုးတက်လာသောကိုယ်ခန္ဓာ၏ရလဒ်အနေဖြင့် ပို၍ ဆွဲဆောင်မှုရှိမည်ဟုထင်မြင်ရန်မျှော်လင့်သော်လည်း၊ ဤသည်မှာမိန်းကလေးအများကထင်မြင်ယူဆခြင်းမဟုတ်ပါ၊
ငါ့ကိုယ်အားဤကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်တဲ့သဘောထားကို၏အရင်းအမြစ်? အထီး porn ကြယ်များ။ အများအားဖြင့်သူတို့နီးပါးလာနိုငျကြွက်သားဖြစ်ကြသည်။ အပူဆုံးအမျိုးသမီးတွေ fucking သူတို့ကိုမြင်လျှင်၏နှစ်နှင့်နှစ်ပေါင်း undo ့အသိပညာနှင့်နားလည်မှုထက်ပိုယူပါလိမ့်မယ်ငါ့စိတ်ကိုတစ်ဦးအမှတ်အသားထားခဲ့တယ်။
ငါအားကစားရုံကိုဆင်းပြောနေတာမထင်ဘူး ၎င်းသည်အံ့ n ဖွယ်ကောင်းသော nofap နှင့်အထွေထွေစိတ်ဓါတ်များကိုကူညီပေးပြီးကျန်းမာသောအစားအစာကိုအားပေးသည်။
ကျွန်တော့်အရှည်ဆုံး ၃၅ ရက်က ဘုရားသခင်လိုခံစားခဲ့ရတယ် ငါအရာအားလုံးမှာအနိုင်ရမျှော်လင့်ထား။ သို့သော်ဤသည်သွားသောလမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ငါ nofap ကိုပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုရှိအောင်လုပ်ဖို့ပဲလုပ်နေတာ။ ငါ 'ယခုငါပြုပြီးပြီ, ကြွင်းသောအရာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပေါ်ထွက်ပါလိမ့်မယ်' 'စဉ်းစားမိတယ် မဖြစ်ခဲ့ပါဘူး ငါ crashing, မီးရှို့ခြင်းနှင့်ခက်ခဲပြန် relapsed ။
အဆိုပါပြproblemနာကို nofap မဟုတ်, ငါ့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်သဘောထားကို။ သေချာတာပေါ့၊ ကိုယ့် fapping ပြproblemနာကိုခေတ္တဖြေရှင်းပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုမိန်းမကောင်းတွေထပ်မံဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းခြင်းမှရိုးရိုးရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်နိုင်ခြင်းမရှိသောအခြားဇာတ်ကောင်ပြissuesနာများကိုလည်းမဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့ပါ။
အများအားဖြင့်5သို့မဟုတ်6ရက်အကြာမှာငါလမ်းပေါ်မှာကျပန်းအမျိုးသမီးတွေမျက်စိစတင်ပါ။ တကယ်တော့ငါဆိတ်ကွယ်ရာမှာမျက်စိစေရန်မိန်းမတို့အဘို့ကိုကြည့်မှအဘယ်သူမျှမအကြောင်းပြချက်လမ်းပေါ်မှာထွက်ကြပြီ။
အခုဒီဟာကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကကျွန်မသတိထားမိတာလားဒါမှမဟုတ်တခြားတခုခုလားငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါမိန်းမတွေကိုဆာလောင်မွတ်သိပ်စွာကြည့်တဲ့အခါသူတို့ကပြန်လှည့်ကြည့်တာဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးတော့တစ်ခုခုလုပ်တာပဲ။ သင်၏ဟော်မုန်းဟန်ချက်ညီမှုနှင့်ကိုယ်ဟန်အနေအထားနှင့်လှုပ်ရှားမှုတို့တွင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအပြောင်းအလဲများသည်သင့်တော်သောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေရှိပါကသင့်အားအမျိုးသမီးများအားပိုမိုဆွဲဆောင်စေမည်မှာသေချာသည်။ သင်၏ကျန်ဂိမ်းကိုသင်မပါ ၀ င်ပါကချက်ချင်းပျက်သွားလိမ့်မည်။ ငါခက်ခဲလမ်းထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
Nofap အနေနဲ့ဆွဲဆောင်မှုမှကူညီနေပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်ဆဲကိုယ့်ကိုကိုယ်အလုပ်မလုပ်ကြိုးစားလုပ်ဖို့ရှိသည်။
သင်ချိုင်းထောက်ကိုဖယ်ရှားတဲ့အခါ, သငျသညျအဟောင်းများကိုဝေဒနာခံစားရရန်စတင်ပါ။ အနာကိုငြိမ်းစေဘယ်တော့မှကြောင့်ဒဏ်ရာများကိုထပ်မြင်နိုင်ဖြစ်လာသည်။
ငါမူလကအတော်လေးတစ်ခုပြင်းထန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးခဲ့ထင်ပါတယ်။ အရမ်းကိုအလွယ်တကူစိတ်လှုပ်ရှားသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်ကျရလိမ့်မယ်။ ဤသည်ငါထင်, ငါ့ကိုလှည့်ပတ်သူတို့အားထူးဆန်းသို့မဟုတ် bothersome ပုံရသည်, ငါအမြဲဒုက္ခမိတ်ဆွေတွေကိုရှာဖွေတာတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
ရှည်လျားသောမေ့လျော့ခံရသောနာကျင်မှုများကိုကျွန်ုပ်မှတ်မိနေပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အထက်တန်းကျောင်းပထမနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်၏သူငယ်ချင်းများအားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ကိုလုံးဝမေ့ခဲ့သည်။ ငါအုပ်စုထဲ၌ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက်ငါသိသောနောက်အရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်ကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ ငါ့အမှားလား တစိတ်တပိုင်းတော့ကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ငါသိသမျှအားလုံးကငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ရွေးပြီးအုပ်စုအသစ်တစ်ခုမှာမပါဝင်ခဲ့ဘူး။ ငါအစား fapped ။
တဖန်ငါမကြီးထွားရန်နောက်ထပ်အခွင့်အလမ်းပေးသောခံရပါ၏တူသောဒါဟာခံစားရပါတယ်။ ဒါဟာခက်ခဲပါလိမ့်မည်, သို့သော်ဤအချိန်ပိုကောင်းပါလိမ့်မည်။
ခဲ, စောင့်ကြည့် & အနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှု၏ကျဆုံးခြင်း
ငါသိအားလုံးသည်ငါ fapping သောအခါ, ငါလူ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့တစ်ဦးအလွန်ထိရောက်မှုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ငါကအောက်ပါအကြောင်းကို2hoot မပေးခဲ့ပါဘူး:
ကလေးမွေးမြူခြင်းအလားအလာ (ဒီလောက်တောင်ရယ်စရာကောင်းပုံရတယ်၊ ဘာကြောင့်တစ်ယောက်ယောက်ကကလေးမွေးတာလဲ)
ကျွန်မဆိုလို, ငါသည်အရာတစ်ခုခုကိုလက်ျာဘက်သို့မဟုတ်မှားအဘယ်ကြောင့်တာရှည် reddit ပို့စ်များကိုရေးသားများနှင့်အတောမသတ် philosophize နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်အရေးယူမှုရောက်လာသောအခါမူကား, ငါသေလွန်သောသူတို့သည်အေးဂျင့်ခဲ့သည်။
ဤအချက်သည်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်နှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။ သက်ဆိုင်သည့်အချက်မှာမျက်မြင်သက်သေများ၏ ဦး နှောက်ထဲ၌အင်တာနက်ကိုအိမ်များတိုင်းနှင့်အိပ်ခန်းတိုင်းသို့ထိုးဖောက်သွားသောယနေ့ကွန်ပျူတာမော်နီတာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
Nofap သည်ကျွန်ုပ်သိသမျှအင်တာနက်နှင့် ပတ်သက်၍ အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သို့သော်အမည်မသိသောကွန်ယက်တစ်ခုဖြစ်သော nofap သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အမှန်တကယ်လူတို့နှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်ရန်နှင့်ကုသမှုမပြုရန်ဆင်ခြေပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါ့အပြင်အင်တာနက်အတွက်မဟုတ်ရင် nofap ကိုကျွန်တော်မလိုအပ်ပါဘူး။